Ɔweɔn-Aban Gilead Bible Skuul​—Nhyiamu Ma Hɔn A Woewie Gilead A Ɔtɔ Do 137 No
Nhyiamu Etsitsir Ahorow
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bulgarian Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English (Borɔfo) Estonian Finnish French Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kabyle Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Krio Lithuanian Malagasy Malay Maya Mfantse Myanmar Nahuatl (Central) Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Oromo Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tankarana Tarascan Telugu Tigrinya Tlapanec Tojolabal Totonac Turkish Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Xhosa Zapotec (Isthmus) Zulu
Nhyiamu Ma Hɔn A Woewie Ɔweɔn-Aban Gilead Bible Skuul A Ɔtɔ Do 137 No
Wɔyɛɛ nhyiamu maa hɔn a wowiee Ɔweɔn-Aban Gilead Bible Skuul a ɔtɔ do 137 no September 13, 2014, wɔ Jehovah Adasefo adzesuabea a ɔwɔ Patterson, New York no. Jehovah Adasefo dze dɛm skuul yi tsetse hɔn asomfo a hɔnho akokwaa no, mbrɛ ɔbɛyɛ a wobotum ahyɛ asafo anaa edwumayɛbea nkorbata a wɔdze hɔn bɔto no dzen. Sɛ wɔkekã etsiefo a wotsiee dwumadzi no wɔ Patterson hɔ ara, nye hɔn a wotwae ma wɔhwɛe wɔ mbea ahorow bi wɔ Canada, Jamaica, Puerto Rico, nye United States no nyinara bɔ mu a, nna hɔn dodow si 12,333.
Samuel Herd, a ɔyɛ Jehovah Adasefo Akwankyerɛ Kuw no munyi na ɔyɛɛ eguamutsenanyi maa nhyiamu no. Wɔ ne nyienyim nsɛm no mu no, ɔtwee adwen sii mbrɛ Jehovah n’adwen krɔn bɔ hɛn adwen do no do. (Isaiah 55:​8, 9) Ɔkãa dɛ, ɔwɔ mu dɛ wɔ abosoom enum mu no, Gilead esuafo no dze Nyankopɔn no nsusui ahyɛ hɔn adwen mu mã dze, naaso Nyankopɔn “n’akwan n’anoano” anaa n’enyienyi kakraabi pɛr na woebohu no. (Job 26:14) Onua Herd kãe so dɛ, aber biara a yebehyia mu esusu Nyankopɔn no nsusui ho no, yenya do mfaso; na dɛmara na nhyiamu yi so bɛyɛ.
“Sunsum No Aba Nye . . . Penkyɛr” Anaa Abotar. (Galatiafo 5:​22) John Larson, a ɔyɛ United States Nkorbata Egyinatukuw no munyi no kyerɛɛ akwan ebien a yebotum afa do ada abotar a ɔyɛ sunsum no aba no bi edzi. Odzi kan no, no ho hia dɛ yesie abotar ma Jehovah ma ɔtsetse hɛn, na ɔboa hɛn ma yesi pi wɔ gyedzi no mu. (1 Peter 5:​10) Abraham yɛɛ abotar ho nhwɛdo dze nam dɛ ɔtɔɔ no bo ase maa Jehovah tsetsee no, na ne nsa kãa Jehovah n’anohoba no.​—Hebrewfo 6:​15.
Otsĩa ebien, no ho hia dɛ yenya hɛnankasa hɛnho abotar. Bi a osiandɛ esuafo no ewie Gilead no ntsi, wɔbɛhyɛ ase ahwehwɛ pii efi hɔnankasa hɔn hɔ. Sɛ wɔhyɛ hɔn dwumadzi a wɔdze bɛhyɛ hɔn nsa no ase na sɛ ahyɛse noara ndzɛmba annkɔ yie a, annhwɛ a wobebisa hɔnho dɛ, ‘Ah, ebɛnadze yɛ me?’ Onua Larson gyinaa nankasa n’asetsena mu osuahu do maa esuafo no awerɛhyɛmu dɛ, sɛ wonya hɔnankasa hɔnho abotar na wɔbɔ hɔnho mbɔdzen a, wobotum egyina nsɛndzendzen ahorow ano. Dɛm kwan yi do no, ɔbɛma Nyankopɔn atsetse hɔn ewie.​—Hebrewfo 6:​11, 12.
“Hom Nkɔ Do Mbrɛ Hom Akoma Adze Na Ɔntsena Ase Daa!” Anthony Morris a ɔyɛ Jehovah Adasefo Akwankyerɛ Kuw no munyi dze n’asɛntsir no gyinaa Ndwom 22:26 do. Kyerɛwsɛm no n’ewiei no kã dɛ, “hom akoma ntsena ase daa.” Sɛ yebenya dɛm nhyira yi a, gyedɛ yɛbrɛ hɛnho adze. Onua Morris sii do dua dɛ, sɛ yɛammbrɛ hɛnho adze a, hɛnho remmba Jehovah do mfaso. Hɛn mu biara, a Christianfo a wɔasom akyɛr mpo kã ho, werɛ botum efir hia a ohia dɛ yɛyɛ dɛ Christ Jesus no.​—2 Peter 1:9.
Yebenya hɔn a wɔbrɛɛ hɔnho adze nye hɔn a wɔammbrɛ hɔnho adze no ho nhwɛdo pii wɔ Kyerɛwnsɛm no mu. Aber a nkorɔfo bi bɔɔ gyee Herod Agrippa do no, ɔdze ahomado gyee enyimnyam a ɔfata Onyankopɔn nkotsee no too mu. Nyankopɔn no bɔfoe bɔɔ no, na “nsaamaa dzii no honam.” (Ndwuma 12:21-​23) Dza ɔnye iyi bɔ ebira no, aber a Jesus kãa Peter n’enyim dɛ ‘ɔnndwen Nyankopɔn dze, na nyimpa dze’ no, obotum aba no dɛ no bo emmfuw, oemmuna, na ɔannkã n’enyim ennsi do so. (Matthew 16:21-​23) Ɔgyee ntsẽa no too mu, na ɔbɛyɛɛ ahobrɛadze ho nhwɛdo pa.​—1 Peter 5:5.
Wɔbɛma esuafo no mu binom akɛyɛ Bethel edwuma wɔ Jehovah Adasefo hɔn edwumayɛbea nkorbata no mu bi mu, na Onua Morris bɔɔ hɔn kɔkɔ dɛ, sɛ wɔannda ahobrɛadze edzi a, hɔn enyi renngye wɔ hɔn edwuma no mu. Naaso, ɔbɛyɛ dzen dɛ obi bohu wɔ nankasa noho dɛ onnyi ahobrɛadze. Mbrɛ ɔbɛyɛ na oesi n’asɛm no do dua yie no, ɔmaa hɔn osuahu bi. Ɔkãa dɛ, mfe pii bi a abɛsen kɔ no, wɔdze ntsẽa maa ɔpanyin bi dɛ ɔannda ahobrɛadze edzi. Ɔpanyin no kyerɛwee kɔr edwumayɛbea nkorbata hɔ dɛ: “Minnyim obiara a ɔbrɛ noho adze sen me.” Onua Morris hyɛɛ esuafo no nkuran dɛ, wonkwetsir dɛm suban no. Sɛ wobotum akɔ do ayɛ ahobrɛadzefo a, ɔnodze ɔnnsɛ dɛ wobu hɔnho dɛ wɔkrɔn sen afofor. Mbom no, ɔsɛ dɛ wɔgye to mu dɛ hɔn a wɔkrɔn sen obiara nye Jehovah Nyankopɔn na Christ Jesus.
“Onnsusu Sunsum No Na Ɔdze Ma.” (John 3:​34) Michael Burnett a ɔyɛ Gilead kyerɛkyerɛnyi no kaa esuafo no dɛ, wɔ hɔn dwumadzi a wɔdze bɛhyɛ hɔn nsa no mu no, sunsum krɔnkrɔn no bɔboa hɔn ma woeedzi nsɛndzendzen anaa adwen a onnsi pi biara a wobehyia no do. Nyankopɔn no sunsum boaa Bezalel ma otumii sii ntamadan no, ɔmmfa ho dɛ ohyiaa nsɛndzendzen pii no. (Exodus 35:30-​35) Nnyɛ Bezalel no mbɔdzembɔ dɛ odwimfo no nkotsee na sunsum krɔnkrɔn no yɛɛ no kɛse, na mbom ɔboaa no ma ɔkyerɛkyerɛe so. Sunsum krɔnkrɔn no botum ayɛ dɛmara ama hɔn a woewie Gilead no, tsitsir no aber a wɔdze nkyerɛkyerɛ suban a ɔwɔ Kyerɛwnsɛm no mu a wosũae wɔ skuul no mu no ridzi dwuma no.
Wɔ Bezalel n’aberdo no, Israelfo mbasiafo so yɛɛ ndwuma etsitsir bi dze boae ma wosii ntamadan no. (Exodus 35:25, 26) Dɛmara so na enuanom mbaa a woewie skuul yi ada no edzi dɛ, wɔyɛ “mbaa a hɔn akoma kenyaan hɔn wɔ nyansa mu” aber a wɔboa hɔn kunnom no. Onua Burnett dze n’asɛm no reba n’ewiei no, otuu esuafo no fo dɛ: “Mbrɛ ɔbɛyɛ ma wo mbɔdzembɔ eker pɛ no, fa setsie nye ahobrɛadze suban kã ho. Sɛ eyɛ dɛm a, Jehovah dze no sunsum no bɛma wo a onnsusu.”
“Aso Enye Me Bɛsaw A?” Mark Noumair a ɔyɛ ɔboafo ma Nsɛnkyerɛw Egyinatukuw no, gyinaa Ɔhen David no nhwɛdo a ɔyɛe aber a ɔmaa wɔdze ahyɛmu adaka no baa Jerusalem no do na ɔkyerɛkyerɛɛ n’asɛntsir no mu. (2 Samuel 6:​12-​14) David fi ahobrɛadze mu nye “no nkowaa hɔn mfonabaa” no sawee, aber a wɔdze Ahyɛmu Adaka no reba no. (2 Samuel 6:​20-​22) Dɛm mfonabaa no werɛ nnkefir da a Ɔhen David nye hɔn dzii asaw no da. Afei Onua Noumair hyɛɛ esuafo no nkuran dɛ ‘wɔnye mfonabaa no nsaw.’ Obisaa hɔn dɛ: “Aso wobohu wo dɛ obi a eboa hɔn a wonnyi dzibea biara no? . . . Ana ebɛma afofor asom wo bo osian hɔn suban pa ahorow no ntsi?”
Sɛ hɔn a wowie skuul yi kɔ do da nokwar dɔ edzi wɔ dɛm kwan yi do a, nna ɔkyerɛ dɛ worusũasua Jehovah. (Ndwom 113:​6, 7) Sɛ mpo binom annda ahobrɛadze edzi a, ɔnnsɛ dɛ esuafo no ma dɛm sintɔ ahorow yi nya hɔn do nkantando. Onua Noumair kãa dɛ: “Bu woho dɛ ennsɛ hwee.” Na ɔdze kãa ho dɛ: “Enye Jehovah nguan no ndzi no dɛ mbrɛ ɔnye hɔn bedzi no no.”
“Fa Ho Kwan Biara A Ibenya No Dzi Dase.” William Samuelson, a ɔhwɛ Dwumadzibea a Wɔhwɛ Theocracy Skuul Ahorow Do no do no kãa ɔsomafo Paul ho asɛm dɛ, nna ɔyɛ obi ɔdze ho kwan biara a onyae no dzii dase. (Ndwuma 17:17) Afei Onua Samuelson hwɛe ma esuafo no mu binom yɛɛ hɔn asɛnka mu osuahu ahorow a woebenya wɔ Gilead hɔ no ho ɔyɛkyerɛ. Dɛ nhwɛdo no, awarfo bi hyiaa basia bi a ɔtɔn adze wɔ bea a wɔtɔn edziban. Wɔtweɔnee ma adzetɔfo no do tsewee koraa, na afei woyii video a wɔato dzin dɛ Ebɛnadze Ntsi na Ɔsɛ dɛ Isũa Bible No? kyerɛɛ no. Bio so, wɔkyerɛɛ no mbrɛ obesi akɔ jw.org akɔhwehwɛ nsɛm pii akã ho wɔ no kurow mu kasa Laotian mu. Awarfo no sanee kɔr hɔ bio nye basia no kɔtoaa nkɔmbɔbɔ no do ma n’enyi gyei.
“Kɔ Do Tu Woho Ma Ahendzi Edwuma.” William Nonkes a ɔyɛ edwuma wɔ dwumadzibea a wɔhwɛ ɔsom edwuma do wɔ United States nkorbata no bisabisaa nyimpa baanan bi a woewie skuul yi no nsɛm. Dɛ mbrɛ ɔwɔ Isaiah 6:8 no, nna hɔn so etu hɔnho ama Ahendzi edwuma no dadaw. Naaso skuul no boaa hɔn ma wɔyɛɛ pii mpo kãa ho. Onuabaa Snolia Maseko kyerɛkyerɛɛ mu dɛ, Gilead skuul no boaa no ma ohun afã ahorow bi a obotum etu mpon, tsitsir no mbrɛ ɔdze ne mber bedzi dwuma yie aber mpo a ɔakɔ asɛnka da mũ no nyinara no. Ɔkãa dɛ: “Skuul no atsetse me ma mehu dɛ sãana mubotum ayɛ pii asen dza nna mususu dɛ mubotum ayɛ no.” Onua Dennis Nielsen hun mbrɛ asɛm a ɔwɔ Zephaniah 3:​17 no botum aboa no ma oeedzi abagura nsɛm a obehyia wɔ asɛnka mu no do. Onua Nielsen kãa dɛ: “Sɛ menam asɛnka mu na ɔtse dɛ ma nkorɔfo nntsie me papa a, ɔsɛ dɛ mekaa dɛ Jehovah enyi agye mbordo, ntsi ɔsɛ dɛ mo so meyɛ dɛmara.”
“Hom Nhwɛ Wimu Nnoma.” (Matthew 6:​26) Stephen Lett a ɔyɛ Akwankyerɛ Kuw no munyi na ɔmaa ɔkasa tsitsir no. Onua Lett gyinaa Jesus ne nkyerɛkyerɛ a ɔnye dɛ yɛngyen hɛn enyi “nhwɛ” nnoma no do kyerɛɛ hɛn ndzɛmba ahorow pii a yebotum esũa efi nnoma no hɔ.​—Job 12:7.
Dɛ nhwɛdo no, dɛ mbrɛ Jehovah ma nnoma edziban no, dɛmara so na ɔbɛma hɛn nsa akã hɛn ehiadze. Yɛwɔ “Nyankopɔn fie,” ntsi ɔma hɛn awerɛhyɛmu dɛ ɔbɔhwɛ “nankasa nedze.” (1 Timothy 3:​15; 5:8) Ɔwɔ mu, ɔsɛ dɛ yɛyɛ hɛn afamu dze. Dɛ mbrɛ nnoma no hwehwɛ edziban a Nyankopɔn dze ma hɔn no, dɛmara na ɔsɛ dɛ hɛn so yɛkɔ do ‘hwehwɛ n’ahenman’ no ansaana hɛn nsa akã ne nhyira.​—Matthew 6:​33.
Onua Lett kãe so dɛ, nnoma pii wɔ hɔ a, sɛ wohu esian a wosũ dze bɔ kɔkɔ. Dɛmara na hɛn so, ansaana “mfom bɔto obi awerɛfir mu” no, yɛbɔ no kɔkɔ wɔ ber a ɔsɛ mu. (Galatiafo 6:1) Afei so, yɛnam hɛn asɛnka edwuma no do bɔ nkorɔfo kɔkɔ wɔ “Ewuradze ne da” a ɔrebɛn ntsɛntsɛm no ho. (Zephaniah 1:​14) Wɔ Onua Lett ne mfatoho fofor mu no, ɔkyerɛkyerɛɛ mu dɛ, dɛ mbrɛ nnoma tu fa nkokwaa atsentsen do no, hɛn so yɛnam Jehovah mboa do dzi akwansidze ahorow a ɔtse dɛ nkokwaa no do.​—Matthew 17:20.
Ewieisɛm. Aber a esuafo no nyaa hɔn abɔdzin nkrataa no wiei no, hɔn mu kor kenkaan krataa bi a ofi esuafo a woewie skuul yi hɔ dze kyerɛɛ hɔn enyisɔ. Wɔ Onua Herd n’ewiei nsɛm no mu no ɔyɛɛ mfatoho bi. Ɔdze mbrɛ yesũa Nyankopɔn no nsusui gu hɛn adwen mu no totoo mbrɛ wɔbɔ prɛgow hyɛ keteke ne ndadze kwan mu no ho. Noho hia dɛ yɛdze hamba pempem do mpɛn pii ansaana ahyɛ mu yie. Dɛmara so na noho hia dɛ, hɔn a woewie skuul yi kɔ do dwendwen dza woesũa wɔ Gilead no ho. Onua Herd kãa dɛ: “Gye ber pempem do ma ondu w’akoma mu tɔnn,” Ɔdze kãa ho dɛ, “Fa Nyankopɔn n’adwen bɔ wo bra, na ebɛyɛ nhyira ama afofor.”
Hɔn A Wowiee Gilead Skuul A Ɔtɔ Do 137 No
Esuafo no a woewie skuul no. *
Yisehak nye Ruth Aberra Asefa
Orlando nye Jessica Cardoso
Jinho nye Sunyoung Chung
Oleg nye Juliana Chuprina
David nye Esther Danthine
Robert nye Lyuba Delahaije
Seth nye Gina Fleming
Jerry Mel nye Dorothy Florencio
Georgi nye Mariya Gogov
Hajime nye Aki Hiraide
Sai nye Nyo Nyo Aung Hlua
Lovemore nye Vimbai Jambaya
Desmond nye Amelia Jones
Cephas nye Caroline Kalinda
Daniel nye Justyna Kazuś
Harrison nye Snolia Maseko
Dennis nye Camilla Nielsen
Simon nye Serena Semaan
Karim nye Nadia Si Saber
Dalton nye Erika Tamura
Michael nye Edwina van Ling
Sattra nye Sara Visetsuk
^ nky. 20 Nnyɛ hɔn a woewie no nyina na hɔn edzin wɔ ha.
Skuulfo No Ho Akontaabu
Skuulfo no hɔn dodow: 48
Hɔn mfe a woedzi, sɛ wɔkyekyɛ mu pɛpɛɛpɛr a: 39.7
Wonumaa hɔn no mfe dodow a woedzi, sɛ wɔkyekyɛ mu pɛpɛɛpɛr a: 22.4
Mfe dodow a woenya wɔ ber nyina som edwuma no mu, sɛ wɔkyekyɛ mu pɛpɛɛpɛr a: 18.0
Aman ahorow a wofifi mu bae: 23
Fa mona Fa mona Nhyiamu Ma Hɔn A Woewie Ɔweɔn-Aban Gilead Bible Skuul A Ɔtɔ Do 137 No
Nhyiamu Ma Hɔn A Woewie Ɔweɔn-Aban Gilead Bible Skuul A Ɔtɔ Do 138 No
Nhyiamu Ma Hɔn A Woewie Gilead A Ɔtɔ Do 137 Ho Nsɛntsitsir